China Vertical Vacuum Focus RF Machine vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Vertical Vacuum Tarisa RF Mashini
Thermolift Tarisa RF neVuvhu Technology
40.68 MHz RF frequency yekurwisa kukwegura
Thermolift ndeye yakasarudzika, yakawanda-yekushandisa Radio Frequency (RF) yeiyo isiri-inokanganisa kurapwa kwe cellulite, kuomesa ganda uye kukwikwidza kwemuviri- pasina nguva yekuzorora.
Thermolift's yakasarudzika UniPolar Pro tekinoroji inopa varapi yakanyanya kurapa kurapa nekuchinja kusingachinjiki pakati pekupisa kwepamusoro kwepidermis uye kupisa kwakadzika kwemafuta epasi peganda. Maviri radiofrequency modes anosanganiswa mune imwechete kifaa kuti asvike ese matanda edermal tishu.
Iine In-Motion TM tekinoroji, Thermolift ndiyo yekutanga sisitimu yekupa isingarwadzi asi inoshanda ganda kusimbisa uye kukwikwidza kwemuviri.
Thermolift's impedance enzanisa tekinoroji inounza yakanyanya RF simba kune iyo nyama. Yakasanganiswa neakasarudzika kudzika tekinoroji tekinoroji, simba rakaiswa mune yepasi-dermal nzvimbo, ichisiya iyo epidermis yakachengetedzwa. Yakachengeteka uye iri nyore kushandisa
Musimboti weKubvisa Focus RF Machine
Thermosharp inoratidzira Dielectric Heating- yakasarudzika mashandiro ayo makuru radiofrequency (RF) simba re40.68 MHz (kutumira mamirioni emamirioni makumi mana neshanu pasekondi) inotumirwa yakananga kumatishu, zvichikonzera kutenderera nekukurumidza kwemamorekuru ayo emvura. Iko kutenderera kunogadzira kukweshesana uko kunogadzira yakasimba uye inoshanda kupisa. Nekuti ganda rinoumbwa kazhinji nemvura, kudziya kubva pamushini uyu kunokonzeresa kudzikama mukati meganda- kubatira tambo dziripo uye kukurudzira kuumbwa kweiyo collagen nyowani apo ichivandudza ukobvu hwayo uye kuenderana. Iyo yakakwira RF frequency inobvumira yakadzika, yakafanana kupisa iyo inogadzira yunifomu mhedzisiro.
CNC mutinhimira yakaipa kumanikidza Technology
NaCNC metric pateni, yakashata kumanikidza inosanganisirwa neyakagadzirirwa yakasarudzika kumanikidza yekumusoro musoro, zvinoenderana neyakatarwa ganda mamiriro emuviri wemunhu, kushandisa kusiana kwakasiyana kwekukanya uye kukwiza muviri kune iyo epidermal matanda eganda, tsinga dzeropa, mafuta mafura uye nhete yeanotyisa. system, nekudaro inogona kunyatso kugadzirisa kuyerera kwemvura pakati pemasero emunhu, kuwedzera kufamba kwemasero, kumutsa maseru, kukurudzira kutenderera kweropa uye lymph kutenderera kweropa risingabatike-mudziyo, kumhanyisa metabolism uye kugadzirisa mamiriro emukati eganda.
Pashure: Muviri unobvisa masaja Machine
Zvadaro: Vertical Physiotherapy Diathermy RET CET Muchina Wemuchina
Inotakurika Vacuum RF Machine
Mini fractional rf mudziyo
Anotakurika Thermosharp Vacuum muchina